”Qofkii NFD ku nool ee Kenya ku taageeraya inay dhul kale oo Soomaaliyeed qabsato waa qof….” | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Qofkii NFD ku nool ee Kenya ku taageeraya inay dhul kale oo...
”Qofkii NFD ku nool ee Kenya ku taageeraya inay dhul kale oo Soomaaliyeed qabsato waa qof….”
(Hadalsame) 08 Sebt 2019 – Nimanka inay NFD dagaan sheeganaya ee maamulka Madoobe ku qanacsan ama Kenya ku taageeraya inay dhul hor leh oo Soomaaliyeed qabsato
Waxay lamid yihiin Ninkii laantii uu saarnaa salka kajaray
Maalintii waagala ee loo bixiyey gaarisa gubay.
Kuwaasoo aanay dad iyo xoolo midna ka tagin Kenyanku ee barna la laayey barna sidii xoolihii xeryaha lagu xareeyey barna kufsi iyo tacaddi la gula kacay Jubada Hoose waxay ahayd meeshii looga gurmadey dadkaas.
Meeshii qaabishay baaqigii dadkaas ka haray ee cayrta ahaa kaddib markii uu allaha u naxariistee Siyaad Barre ugu goodiyey haddaysan dadkaas saacad gudeheed ooda uga qaadin in ay indhahooda wax ku arkayaan.
AADAN BARRE AYAA UGU HORREEYA CIDDA GEEDKA AYSAARANTAHAY JAREYSA.
Waxaa Qoray: Sahruuja Cabdi Cali
Previous articleImaaraadka oo QARINAYA mashruuc ballaaran oo uu u joojiyay dhaqaalo darro darteed!!
Next articleNAXARIISTA WAALIDKA: ”Wuxuu qado u kexeeyay aabbihii oo aad u gaboobey, kaddib maxaa dhacay?!”